Mgbe ị na-atụ anya ka ịgbanwee si Windows ekwentị na iPhone na-agba ọsọ iOS 9, ị nwere chọrọ ịmata kacha ụzọ nyefee data si gị ochie mobile ndị ọhụrụ otu. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ngwa mepụtara ma nke mgbere nke pụrụ inyere gị na-ọrụ mere, onye ọ bụla n'ime ha bụ oru oma ezu na-enye mfe na kensinammuo ụzọ nyefee data.
Iji imeri ọdịiche n'etiti abụọ kwuru nyiwe, Wondershare mepụtara otu oru oma-akpọ ngwá ọrụ MobileTrans. MobileTrans Bụ ike nke na-ebufe gị data si gị ochie ekwentị ọhụrụ otu mfe n'agbanyeghị nke n'elu ikpo okwu nke sistem na isi na ebe mobiles.
Wondershare MobileTrans Dị maka ma Windows na Mac kọmputa. Nke a pụtara na irrespective nke ụdị na kọmputa na sistemụ ị na-eji, ị nwere ike iwunye ngwa na gị na PC na nwere ike ime ka dum data ebufe usoro si otu ekwentị ọzọ mfe.
Ị nwere ike ibudata kwesịrị ekwesị version nke Wondershare MobileTrans maka kọmputa gị site na ya ukara website, na download njikọ n'ihi na ma variants nke usoro ihe omume e nyere n'okpuru:
3.289.116 ndị ebudatara ya
Ụfọdụ bụ isi atụmatụ na Wondershare MobileTrans na-enye ya ọgwụgwụ-ọrụ bụ:
Ekwentị ekwentị Nyefee - Nke a wuru na-atụmatụ nke ngwa-enye gị ohere nyefee gị data site na otu ekwentị ọzọ ozugbo, ie enweghị na-ewere ndabere na gị PC. Iji na-eji nke a mma, ihe niile ị chọrọ ime bụ, jikọọ ma ndị isi na-aga ngwaọrụ gị na kọmputa n'out oge site na iji ha kwekọrọ ekwekọ data cables.
Ndabere - N'agbanyeghị nke n'elu ikpo okwu nke sistemụ arụnyere na mkpanaka gị na ngwaọrụ arụpụtara site ọ bụla na-ere, Wondershare MobileTrans-enye gị ohere ndabere nile dị n'ime ya. Dị otú ahụ kwadoo data nwere ike weghachiri eweghachi na-otu ngwaọrụ mgbe ọ bụla mkpa ma ọ bụ ọ pụkwara-eweghachi a dị iche iche ngwaọrụ, nke nwere ike ịbụ ikpe mgbe ịmafe a ọhụrụ ekwentị, karịsịa site n'aka a dị iche iche na-ere ma ọ bụ a dị iche iche n'elu ikpo okwu kpam kpam.
Weghachi - Nke a vasatail mma-enye gị iji weghachi data bụghị naanị site na Wondershare MobileTrans ndabere faịlụ, kamakwa site faịlụ si dị iche iche na isi mmalite dị ka iTunes, iCloud, ma ọ bụ Blackberry.
Full ekwentị Erasure - Na a nhọrọ, i nwere ike igosi zuru ezu erasure nke mkpanaka gị na ngwaọrụ. Nke a na-kemfe mgbe ị chọrọ na-ere na ekwentị gị ka à jụrụ ya ajụ, na-achọghị na ozi nkeonwe gị ga-gụrụ amaghị ndị mmadụ.
Nyefee Data si gị Windows na ekwentị iPhone na iOS 9 Iji Wondershare MobileTrans
Jiri n'elu njikọ ibudata Wondershare MobileTrans na gị Windows kọmputa.
Wụnye ebudatara omume na iji mgbe echichi usoro.
Jiri mbụ data cables gị Windows ekwentị na iPhone jikọọ ma ndị ngwaọrụ gị Windows kọmputa n'out oge.
Ẹkedori Wondershare MobileTrans.
Site na isi interface, pịa na ekwentị ekwentị Nyefee tile.
Na-esote na ihuenyo, echere ruo mgbe Wondershare MobileTrans achọpụta ma ndị ntị na-egosiputa ha akara ngosi dị na kwekọrọ ekwekọ panes.
Cheta na: Ọ bụrụ na igwe na-enịm n'okpuru ziri ezi panes, ị nwere ike pịa tụgharịa button si n'elu nke center ebi ndụ. Ọgwụgwụ N'ihi kwesịrị na Windows ekwentị kwesịrị n'okpuru Isi Iyi ebi ndụ na-ekpe, na iPhone kwesịrị n'okpuru Destination otu onye n'ime nri.
Chere ruo mgbe Wondershare MobileTrans achọpụta niile nyefee data na gị na Windows ekwentị nwere ngosipụta ya na center ebi ndụ.
Ozugbo mere, na center ebi ndụ ya, ego checkbox na-na-anọchi anya data na ị chọrọ nyefee gị iPhone.
Cheta na: Mgbe oge nke a edere, Wondershare MobileTrans bụ naanị ike na-ebufe foto, egwú, na video faịlụ site na Windows ekwentị. Iji nyefee kọntaktị gị iPhone na-agba ọsọ iOS 9, ị ga-ndabere ha ruo OneDrive na mgbe nyefee ha ọhụrụ gị iPhone n'ebe ahụ.
Optionally, na ala nke na-aga ebi ndụ na nri, ị nwere ike ịlele Doro Anya data tupu oyiri checkbox ihichapu niile ẹdude data si iPhone.
Cheta na: Nke a bụ na-enye aka ma ọ bụrụ na iPhone bụ agadi na e dere ihe na data na ị na-adịkwaghị bu n'obi iji.
Mgbe na-ahọpụta gị chọrọ ọdịnaya nyefee, pịa Malite Copy button na ala nke center ebi ndụ.
Na-esote na windo na-emepe, echere ruo mgbe họrọ akpọkwa na-zigara gị ọhụrụ iPhone.
Pịa OK mgbe mere.
Kwupu ma ndị ntị na kọmputa gị, Malitegharịa ekwentị gị iPhone, ma malite iji ya na-ahụkarị.
Nyefee OneDrive ndabere ka iOS 9 Iji Wondershare MobileTrans
Jide n'aka na kọmputa na jikọọ na Internet.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere ziri ezi nzere (aha njirimara na paswọọdụ) na OneDrive na e dere ihe Ndi ana-akpo ndabere gị Windows ekwentị.
Jiri data USB jikọọ gị iPhone na-agba ọsọ iOS 9 na kọmputa.
Si ya isi interface, pịa Weghachi si Backups tile.
Si dị nhọrọ, pịa OneDrive bọtịnụ.
Na-esote window, site n'aka ekpe ebi ndụ, pịa Sign na bọtịnụ.
Na dị ubi na Sign na igbe na Pop elu, pịnye gị OneDrive akaụntụ si na aha njirimara na paswọọdụ wee pịa Sign na.
On ọzọ igbe, pịa Ee ịnọgide.
Ozugbo gị na akaụntụ nyochaa, lelee Ndi ana-akpo checkbox si center ebi ndụ.
Site na ala nke Destination ebi ndụ na nri, pịa Doro Anya data tupu oyiri checkbox ihichapu niile ẹdude data si iPhone. (Nhọrọ)
Ozugbo mere, pịa Malite Nyefee button si n'okpuru etiti ebi ndụ.
Na-esote window, chere ruo mgbe Wondershare MobileTrans Nyefe kọntaktị site na OneDrive gị iPhone.
Ọ bụ ezie na-ebufe gị data si gị ochie Windows ekwentị ọhụrụ gị iPhone bụ a aka ọrụ, Wondershare MobileTrans simplifies usoro site na-ekwe ka ị nyefee dịkarịa ala photos na mgbasa ozi faịlụ na-enweghị metụtara ọ bụla atọ ọzọ omume.
> Resource> Naghachi> Ihe kacha ụzọ Nyefee Windows na ekwentị iOS 9